Chelsea Oo Ay Qasab Ku Noqotay In Ay Raali Galin Saxaafada U Mariso Dad Waynaha Ree China Iyo Sababta Arintan Keentay | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Chelsea Oo Ay Qasab Ku Noqotay In Ay Raali Galin Saxaafada U Mariso Dad Waynaha Ree China Iyo Sababta Arintan Keentay
Xidiga kooxda Chelsea ee Kenedy ayaa baraha bulshada soo dhigay sawiro iyo erayo uu ku aflagaadeeyay dad waynaha ree China laakiin xidiga ree Brazil ayay Chelsea anshax marin ku samaysay waxaana lagu qasbay in uu raali galin ka bixiyo waxa uu dad waynaha ree China kaga cadhaysay.
Kenedy ayaa baraha bulshada soo dhigay sawiro taxane ahaa iyo erayo ay ka mid ahaayeen: ‘f***ing China. Toosa China doqmo ayaad tihiine” Wuxuuna sidoo kale soo qaadatay tilmaamo muujinaya cunsurinimo iyo aflagaado ay dadka ree China si wayn uga cadhoodeen. Laakiin Chelsea ayaa si buuxda raali galin uga bixisay.
Qoraal dheer oo Chelsea ay arintan uga hadashay ayaa lagu bilaabay: “Jull 22, kooxda kubbada cagta Chelsea waxay soo dhaayn diiran iyo saaxiibtinimo ay jamaahiirta China kagala kulantay National Stadium, si kastaba ha ahaatee waxaanu la yaabnay oo aanu ka niyadjabnay in hal maalin kadib kulanka in mid mid ah ciyaartoydada da’yarta ah ee Kenedy uu fariimo ku soo daabacay barihiisa bulshada taas oo dhibaato u gaysatay dareenka dadka China’.
Qoraalka Chelsea ayaa la sii raaciyay: “Nasiib daro, xataa inkasta oo uu si deg deg ah u tirtiray/masaxay fariimaha isla markaana uu raali galin ka bixyay, sidoo kalena ay kooxdu raali galin kaga bixisay baraha kooxda ee China, haddaba dhibaatadu way dhacday. Kooxda kubbada cagta Chelsea waxay markale si furan oo daacad ah u bixinaysaa raali galin”.
Qoraalka Chelsea oo aad u dheer ayaa lagu sii daray: “Ficilada Kendey waxay ahaayeen kuwo qalad ah kuwaas oo uu si fiican wax uga baran doono, habdhaqankiisu ma matalo kooxda oo dhan isla markaana kuma qumana waxa wayn ee kooxda laga filanayo waxayna xadiday ciyaartoydeeda da’yarta ah. Si adag ayaa loo canaantay oo loo anshax mariyay”.
Kenedy ayaan ka fiirsan waxyaabaha uu barihiisa bulshada dhigay taas oo dhibaato wayn u soo jiiday naftiisa iyo kooxdiisa Blues ee taageerada wayn ka doonaysay dadka aduunka ugu badan ee ree China halkaas oo noqotay goob ay kooxaha waa wayni ku tartamaaan.